फलफ्रेन्डसंग फुटबल हेर्नजाँदा श्रीमतीले टिभीमा लाइभ देखेपछि ! - Himali Patrika
फलफ्रेन्डसंग फुटबल हेर्नजाँदा श्रीमतीले टिभीमा लाइभ देखेपछि !
हिमाली पत्रिका १३ माघ २०७६, 11:57 am
काठमाडौं। अहिले विश्वभर एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। एक विवाहित युवक आफ्नो श्रीमतीलाइ छलेर गल्फफ्रेन्डसंग मस्ती गर्दैगर्दा भेटाइन त्यो पनि टिभी लाइभमा। इक्वेडरका देवेइ एन्ड्रेड नामका ती व्यक्तिले फुटबलरंगशालामा बसेर बार्सिलोना र डेलफिनको फुटबल खेल हेरिरहेका थिए ।
उनकी गर्लफ्रेण्ड उनको छेउमै थिइन् । संसारलाई बिर्सेर बसेका ती व्यक्तिले खेल हेर्ने क्रममा गर्लफ्रेण्डलाई किस गरिरहेका थिए ।
ती व्यक्तिलाई रत्तिभर पत्तो थिएन कि खेल लाइभ कभर गरिरहेका क्यामेराले उनको यो हर्कत पनि कभर गरिरहेका थिए । उनीहरुको हर्कत स्टेडियममा जडित ठूला क्रिनसँसै टिभीमा पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको थियो ।
जब देवेइलाई महसुस भयो कि उनको भिडियो लाइभ भइरहेको छ, उनी सचेत भए । तर, त्यतिबेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो । उनकी श्रीमतीले घरमा बसेर टिभीमा यही खेल हेरिरहेकी थिइन् जसले देवेइको चर्तिकला पनि देखिसकेकी थिइन् ।
देवेइको हर्कत देखेपछि उनकी श्रीमती घर छाडेर गइन् । यो भिडियो इक्वेडरसहित विश्वभर भाइरल भइरहेको छ । भिडियो भाइरल भएपछि र श्रीमती घर छाडेर गएपछि देवेइले इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक रुपमा एक पोस्ट लेखेर आफ्नो गल्तीको लागि माफी माग्दै श्रीमतीलाई घर फर्कन आग्रह गरेका छन् ।
भिडियो भाइरल भएपछि र आफूमाथि व्यङग्य हुन थालेपछि उनले मानिसबाट नै गल्ती हुने भन्दै मानिसहरुलाई यो मुद्दा छाड्न आग्रह गरेका छन् ।